कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? फोटोले खुलाएको रहस्य – tvNepali.net
माओवादी जनयुद्धका बारेमा थप केहि भनिरहन जरुरी छैन । सबैले बुझेकै छन् । बेला बेला यस्ता तस्विर र खबरहरुले तत्कालिन शसस्त्र युद्धको बारेमा कौतुहलता बढाउँने गर्छन् । अहिले सामाजिक साइट फेसबुकमा यो तस्विर खुब चलिरहेको छ ।
हामीले जहाँबाट यो तस्विर साभार गर्यौँ, त्यहाँ सयौँ सेयर भएको छ । हामीले आज अप्रिल फस्टमा देखेका कारण यो तस्विर बारे थप जानकारी लिन खोजेनौँ तर तस्विर देख्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा पनि एउटै प्रश्न बारम्बार आयो ।
हामीले त्यहि प्रश्न यहाँ जस्ताको तस्तै राखेका छौँ । कति पल्ट दोहोरिएर एउटै प्रश्न आयो भन्ने नगन्नु होला । यो एउटा दुखान्त अप्रिल फर्स्टको खबर हो भन्ने मान्नुहोला ।
प्रश्न यस्तो छ र यसरी मनमा दोहोरियो । कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ?
कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ? कहाँ छिन् अहिले यी तत्कालिन माओवादी लडाकु ?
तपाईको समय बर्बाद पारेकोमा माफी चाहन्छौँ । अरुलाई नि अप्रिल फर्स्ट मनाउँने भए सेयर गर्नुहोला । बेस्मारी गाली गरेर आजको दिनमा आफू मुर्ख भएको प्रमाण चै नदिनुहोला । धन्यवाद
PreviousPrevious post:‘सारेगमप’ मा प्रितमको चमत्कार, जज नै भए कायल – भिडियो हेर्नुहोस्